ဝိမုတ္တိသုခ (The Bliss Of Emancipation): ဧည့်သည် - The Guest (The Most Famous Dhamma Poem In Myanmar Buddhism Society)
ဧည့်သည် - The Guest (The Most Famous Dhamma Poem In Myanmar Buddhism Society)
ဧည့်သည် (THE GUEST)
လာတုံးကလဲ၊ တစ်ယောက်ထဲနော်၊ လက်တွဲခေါ်ကာ၊ ဖော်မပါဘူး၊ ဥစ္စာချည်းနှီး၊ ကိုယ်ထီးတည်း။
ပြန်သွားတော့လဲ၊ တစ်ယောက်ထဲနော်၊ လက်တွဲခေါ်ကာ၊ ဖော်မပါဘူး၊ ဥစ္စာချည်းနှီး၊ ကိုယ်ထီးတည်း။
လာပြီးတော့နား၊ မသွားသေးခင်၊ ချိန်လေးတွင်မှ၊ ၀န်းကျင်းယှက်နွယ်၊ နှောင်ကြိုးသွယ်ကြ၊ ပြုံးရယ်မဲ့ငို၊ ချစ်မုန်းပိုကြ။
မလိုဒေါသ၊ လိုလောဘနှင့်၊ ဘ၀ရိပ်မြုံ၊ ကကြိုးစုံခဲ့၊ ကံကုန်မိုးချုပ်၊ လက်တွဲဖြုတ်ကာ၊ သုတ်သုတ်ဆောလျင်၊ ခရီးနှင်သည်၊ တို့ လျင် ဧည့်သည်ပါတကား။
(I think this poem was written By Venerable Min Gun Sayardaw Gyi but it is not sure. And there was an English translation to this poem by U Moe Hein (Son Of Journal Gyaw U Chit Maung). If anyone who has this English Translation, we cordially invite to share with us. Regards /Vimuttisukha)
Posted by The Bliss Of Emancipation at 4:12 AM